Datim-pifidianana : manome hatramin’ny 13 jona ny Ceni | NewsMada
Datim-pifidianana : manome hatramin’ny 13 jona ny Ceni
Par Taratra sur 23/05/2018
“Ny irariana,mba ho tonga ara-potoana ny marimaritra iraisana hahazoana miroso amin’ny fifidianana. Misy ny fe-potoana efa napetraky ny Ceni hatramin’ny 13 jona ny amin’izay fifanarahana politika hahazoana miroso amin’ny fifidianana izay. Rehefa tonga izay, ho hita eo ny zava-kitranga.” hoy ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Nanisana, omaly.
Fepetra roa lehibe no tadiavina mba hahazoantsika miroso amin’ny fifidianana. Voalohany, ny lalàna mifehy ny fifidianana, izay efa navoakan’ny filohan’ny Repoblika hanankery. Faharoa, ny fitadiavana filaminana, satria izay no miantoka ny fifidianana handeha araka ny tokony ho izy.
Mila filaminana ny fanatanterahana fifidianana
“Mety ho sahirana isika raha handroso fifidianana ao anatin’ny korontana”, hoy izy.
Irariana ny hahitan’ny besinimaro ny filaminana. Ny tena tadiavina, ny fanarahana izay voasoritry ny lalàmpanorenana. Mety hiteraka fahasahiranana raha mivoaka amin’ny lalàmpanorenana isika.
Izay no anentanana ny rehetra, ny andaniny sy ny ankilany, mba tena hijery ny tombontsoam-pirenena. Tsy tombontsoan’antoko na olom-bitsy no entina hitera-pahavoazana ho an’ny firenena. Mikarakara fifidianana ny Ceni, fa sarotra ho azy ny hanao fampihavanana.
Na izany aza, tsy afa-mipetra-potsiny eo anatrehan’ny olana lehibe eto amin’ny firenena izy Ceni. Tsy maintsy tadiavina izay fomba hampihaonana ny mpisehatra politika hahazoan’izy ireo miady hevitra sy mitady izay lalana hirosoana amin’ny fifidianana. Na lalàna tsara na ratsy alefa eo: natao hanatanteraka fifidianana hatrany ny Ceni eo anatrehan’ny trangan-javatra, araka ny fanazavany.